I-China Monoblock Control Valve P80 yokukhiqiza kanye neFektha | Junbao
Ama-valve we-P80 ochungechunge anokwakhiwa kwengcindezi ephakathi nendawo ephezulu athuthukiswa ngokusekwe kubuchwepheshe baseYurophu. ♦ I-valve yangaphakathi yokuhlola: I-valve yokuhlola ngaphakathi komzimba we-valve ukufaka i-hydraulic uwoyela ukuthi ingabuyiswa. ♦ I-valve yangaphakathi yokusiza ngaphakathi: I-valve yokusiza ngaphakathi komzimba we-valve iyakwazi ukulungisa ingcindezi yokusebenza kohlelo lwe-hydraulic. ♦ Indlela kawoyela: Ukujikeleza okuhambisana, amandla angaphezu kwenketho ♦ Vala ukwakhiwa ...
Ama-valve we-P80 ochungechunge anokwakhiwa kwengcindezi ephakathi nendawo ephezulu athuthukiswa ngokusekwe kubuchwepheshe baseYurophu.
Construction Ukwakha i-Valve: ukwakhiwa kwe-monoblock, ama-levers ayi-1-6.
Manual I -book etholakalayo, ukulawulwa kwe-pneumatic, ugesi nokulawulwa kwe-pneumatic, i-hydraulic and control kagesi nokunye.
I-P 80 F-OT T (Ukubuya Kwentwasahlobo); W (DetentControl)
T (Umsebenzi weSpool) O 、 A、Y
I-TNom.Pressure (MPa): E16 、 F20
Nom. Izinga Lokugeleza: 80 (L / imizuzu)
I-Monoblock Directional control Valve
Nom. Izinga lokugeleza
(MPa) Ingcindezi Yasemuva
（5m) ukunemba kokuhlunga
♦ PI-80 Series Monoblock Directional Controlvevu Valves
Esedlule: I-Monoblock Controlveve Valve DCV40
Olandelayo: I-SD5 ye-Monoblock Controlveve